Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Salal Dr. Axmed Naasir Maxamed Xaashi oo xilkii Gobolka Salal la wareegay | shiniilenews.com
Saturday, April 23rd, 2016 | Posted by hadhagaala
Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Salal Dr. Axmed Naasir Maxamed Xaashi oo xilkii Gobolka Salal la wareegay
Saylac(SHNN)Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Salal ee xaruntiisu tahay magaalada Taariikhiga ah ee Saylac Dr. Axmed Naasir Maxamed Xaashi, ayaa ku guulaystay xalinta mushkilad shaqaaqo ka taagnayd deegaanka Saylac oo sababtay xadhiga 23 dhalinyaro Ciyaalo Iskuul ah, kuwaas oo u xidhnaa sadex maalmood rabshado dhexmaray.
Badhasaabka cusub oo xilka la wareegay maalintii shalay, ayaa ku guulaystay xalinta arrintas, wuxuuna amray in Ooda laga qaado dhalinyaradaa oo xoriyadoofii loo soo celiyo. Kadib markii uu xaliyay arrintii ay u xidhnaayeen.
“waanu dhamaynay arrintaa waana lasoo daayay dhalinyaradaa oo ka socotay laba Dugsi oo rabshado dhexmareen’ sidaa waxa shebekada wararka ee Shiniile News Network u sheegay maanta Badhasaabka cusub ee Salal Dr. Axmed Naasir Maxamed Xaashi.
Dhinaca kale Badhasaabka ayaaa si rasmi ah xilka ugula wareegay Munaasibad balaadhan oo ay kasoo qayb galeen Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, Wasiir ku xigeenka Diinta iyo Awqaafta, Wasiir Dawlaha Maamulka gobolada iyo degmooyinka, Agaasimaha Maamulka gobolada iyo Degmooyinka ee Wasaaradda Arrimaha Guddaha Somaliland.
Waxaa ugu horayn halkaasi ka hadlay Badhasaabka xilka wareejinaya Mudane Farxaan Xasan Cabdi waxaanu si fiican uga sheekeeyay Waxqabadkii uu Qabtay mudadii uu Xilka Gobolka Salal hayay.
Geesta kale Badhasaabka cusub, wuxuu uga mahadceliyay dadweynaha sidii ay usoo dhoweeyeen iyo dareeenka iyo shucuurta ay ku qaabileen. Badhasaabka Cusub Dr. Axmed Naasir, ayaa balanqaaday inuu hawsha qaranka iyo masuuliyada loo igmaday halkaa kasii wadi doono,
sidoo kale waxa ka hadlay xubnaha Wasiiradda ee ka qaybgalay munaasibadaa iyo masuuliyiin kale, kuwaas oo Badhasaabka ku amaanay mudadii uu joogay gobolka Daad-Madheedh oo ay sheegeen in lagu ogaaday hawlkarnimadiisa. Sidaa awgeed waxay xuseen inuu yahay masuul ka soo bixi kara hawshiisa, waxayna Illaahay uga baryeen inuu u fududeeyo xilka.
Wariye Maxamed Cawaale Daahir (Saylac)